5 Digital Kushambadzira maitiro mushambadzi wese anofanira kuziva - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
5 Dhijitari Kushambadzira zvinoitika mushambadzi wese anofanira kuziva
Ndiwo mutambo wekubata nguva dzose kuti uzive zvinoenderana nezvinoshanda zvinobudirira Digital Marketing. Google inogadziridza maalgorithms ayo nguva nenguva, vatengi vanosvetuka kubva kune imwe saiti kuenda kune imwe, kunyangwe evanhu vezvenhau kuchinja kunoda nguva dzose dzidzo. Kutarisana nezvose izvi zvinova zvakaoma maererano neizvo zvingashanda zvakanyanya kune kambani yako digital advertising zano. Tarisa uone maitiro mashanu akabatsira makambani kugara kumberi muchikwata cheDhijitari Kushambadzira:
1. Inopindura uye zviri nani gutsikana ndiyo kiyi
Mazuva ano vatengi vanotarisira kuona zvakawanda zvinoenderana gutsikana pane kungoita tsananguro pfupi yechigadzirwa. Mishumo inotaura zvakajeka izvozvo digital advertising mishandirapamwe yaisanganisira enguva dzose mablog pamasaiti avo aive nehurefu hwakawanda hwechizvarwa chekutungamira pane avo vasina.
2. Kutaridzika kwemidhiya mifananidzo yemifananidzo
Achishandisa mavhidhiyo, mapodcast, uye zvinyorwa zvinofambidzana zvinowedzera iye mutengi kufarira kusangana newe zvakanyanya. Iyo inotumirawo meseji yakareba mune ipfupi nguva yenguva. Iri zano rinofanirwa kutevera mune yako Digital Marketing kurwisa.
3. Kuwedzera kwepamhepo kushambadzira
Zvekushambadza zvepamhepo zvakaratidza kuve akanyanya kunangwa akakamurwa matekiniki evakuru vako pamwe nevatengi vatsva. Kazhinji, vanhu vanopedza nguva yavo yekuzorora vachitsvaga pamusoro pe Internet. Nekudaro, zvakanangwa online ads zvinowedzera rokutengesa uye nzira dzekusimudzira.
Kuita zvemunhu kunoita kuti vatengi vanzwe vakasarudzika nezve ivo. Vanonzwa kuti vari kubvumwa uye kuchengetwa. Kutevera yakasarudzika zano kunoguma mukukwezva nekusimbisa yakagutsikana mutengi base.
5. Latest in famba zvigadzirwa
2015 yakaona kuwedzera kunoshamisa kweakarongeka uye akabatana tekinoroji. Iko kushandiswa kwemafoni efoni kwagonesa vanhu vazhinji uye vazhinji kuti vabatanidze uye vapindure nekukasira kune zvavanoda. Nekudaro, zvakakosha kuti uenderere pamwe neazvino tekinoroji iri kupihwa mundima iyi.
Dhijitari Shanduko eBook
Kushambadzira Hacks: Maitiro Ekugadzira Inotungamira mu Instagram (Yekutanga)